स्देशमा नै केही गर्छु भन्ने युवालाई खुशीको खबर, अब राज्यले नै दिनेछ २ प्रतिशतमा ब्याज ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Economic News/स्देशमा नै केही गर्छु भन्ने युवालाई खुशीको खबर, अब राज्यले नै दिनेछ २ प्रतिशतमा ब्याज !
Economic NewsEmployement Opprotunity
स्देशमा नै केही गर्छु भन्ने युवालाई खुशीको खबर, अब राज्यले नै दिनेछ २ प्रतिशतमा ब्याज !
कर्जा उपलब्ध गराउने आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरिसकेको छ । उद्यमीले २ प्रतिशतमै ऋण पाउने गरी हामीले मोडालिटी बनाएका छाँै, फुयाँलले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक बैङ्कलाई यो ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेछ । ” उहाँका अनुसार योग्य आवेदक पहिचान गरेर विवरण बैङ्कमा पठाइने छ । साढे चार वर्षे अवधिको यो ऋणबापतको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको उसको निगरानी तथा सहायता उपलब्ध गराउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने छ ।